विश्व Archives - Page 42 of 66 -
चीनमा शक्तिशाली भुइँचालो
चीनमा सोमबार राती आएको भूकम्पका कारण कम्तीमा एघार जनाको मृत्यु भएको छ । देशको सिन्चुआन प्रान्तमा भएको सो घटनामा परी अरु १ सय २२ जना घाइते भएका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । चिनियाँ भूकम्प सञ्जाल केन्द्र (सिइएनसी) का अनुसार ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । स्थानीय समयानुसार १०.५५ बजे राती भूकम्प गएको थियो । अधिकारीहरुले खोजी तथा उद्धार कार्य चलिरहेको जनाएका छन् । आपत्कालिन व्यवस्थापन मन्त्रालयले घटनास्थलमा आपत्कालिन उद्धार टोली… पुरा पढौ
जादु देखाउन आईतबार नदीमा पिँजडासहित डुबेका ब्यक्ति अझै फेला परेनन्
जादु देखाउनका लागि आफूलाई पिँजडामा थुनेर नदीमा डुबेका एक जना जादुगर आईतबारदेखि नदिमै बेपत्ता भएका छन् । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यस्थित सोनारपुर निवासी जादुगर चञ्चल लाहिडी हुगली नदीमा बेपत्ता भएका हुन् । उनी तालासहितको पिँजडामा थुनिएर नदीमा डुबेको अवस्थामा सकुशल बाहिर निस्कने जादु देखाउने अभियानमा थिए । ४१ वर्षीय लाहिडीले यस प्रकारको कला यसअघि नै सफलतापूर्वक देखाइसकेको बताइन्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले आइतबार हावडा पुल मुनी उक्त कला देखाउने… पुरा पढौ
रियल मड्रिडका कप्तान बैवाहिक बन्धनमा,कोसंग गरे विवाह ?
स्पेन तथा रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोस बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । उनले लामो समय देखि प्रेम सम्बन्धमा रहकी प्रेमिका तथा टेलिभिजन प्रस्तोता पिलार रुबीयोसँग विवाह गरेका हुन् । शनिबार विशेष समारोहको आयोजना गर्दै रामोस र पिलारले बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । सेभियाको क्याथाड्रलमा भएको विवाहमा स्टार खेलाडीका साथै केही कलाकारको सहभागिता हरेको थियो । यसका साथै मिडियाहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । रामोसको विवाहमा चार सयभन्दा बढि मानिसको सहभागिता रहेको… पुरा पढौ
किन दिए ७ सय डाक्टरले एकसाथ राजीनामा ?
पश्चिम बंगालमा दुई जुनियर डाक्टरहरुमाथि भएको हिंस्रक हमलापछि सुरु भएको आन्दोलन लगातार बढिरहेको छ । शुक्रवार बंगाल बाहिर समेत कैयौं राज्यमा आन्दोलनरत डाक्टरलाई समर्थन मिलेको छ । दिल्ली, मुम्बई समेत तमाम शहरहरुका ठूला ठूला अस्पताल बन्द रहेका छन् । अहिले पश्चिम बंगालमा यो समस्या लगातार बढिरहेको छ । जसका कारण पूरा स्वास्थ्य अवस्था समेत धरमराएको छ । एम्स असोसिएशनको २ दिनको अल्टिमेटम हिंसाको शिकार भएका साथीहरुप्रति समर्थन जनाउँदै बंगालका ७०० सरकारी… पुरा पढौ
बजेटको विषयमा संसद भवनमै सांसदविच कुटाकुट
केन्यामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै सांसदविच कुटाकुट भएको छ । सांसद रशिद कास्सिम नाम गरेका एक सांसदले फातुमा गेडी नाम गरेकी सांसदलाई आक्रमण गरेको हो । आक्रमणपछिको एक फोटोमा गेडी रुँदै गरेको र उनको मुखमा रगत निस्केको देखिन्छ । उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएपछि यस समाचारले बढी चर्चा पाएको छ। पूर्वी केन्याबाट सांसदमा निर्वाचित कास्सिमले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा किन रकम विनियोजन नगरेको भन्दै गेडीसँग संसद भवनस्थित गाडी… पुरा पढौ
ज्यानमारा लिची !
उत्तरी भारतमा धेरै लिची खाएका कारण पछिल्लो तीन सातामा ४७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।बिहारका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएअनुसार सुक्ष्म इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोमका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको हो। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार ती बालबालिकाको रगतमा चिनीको मात्रा कम भएको थियो। रगतमा चिनीको मात्रा कम भएपछि शरीरले फ्याट्टी एसिडलाई पचाएर ग्लुकोज बढाउन थाल्छ। रगतमा चिनी कम हुनुका पछाडी लिचीमा हुने रसायन भूमिका खेलेको उनीहरूले बताएका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले हामीलाई भनेअनुसार लिची त्यस्तो प्रकारको… पुरा पढौ
गोली हानेर प्रेम जोडीद्धारा आत्महत्या
राजस्थानको जैसलमेरमा एक जोडीले आफैलाई पेस्तोल हानेर आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार दुवै २१ वर्षका प्रेमि शंकर जाट र प्रमिका अन्जु सुथारले घरेलु हिसाबले बनाइएको पेस्तोलले आफैलाई गोली हानेर हत्या गरेका हुन् । पेस्तोलले गोली हान्नुअघि उनीहरुले खिचेको तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल बनेको छ ।प्रहरीका अनुसार युवतीको करिव डेढ महिनाअघि विवाह भएको थियो भने युवक अविवाहित थिए । दुवैको प्रेम सम्बन्ध भएको र एक आपसमा विवाह गर्न नपाउँदा आत्महत्या… पुरा पढौ
देशलाई जोगाउन राष्ट्रपतिले बेचे आफुले चढ्ने विमान
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले देशलाई जोगाउन आफुले चढ्ने विमान बेच्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिपति आन्ड्रेस म्यानुएल लोपेस ओब्राडोरले पछिल्लो समय केही आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको मेक्सिकाको समस्या केही हदसम्म भए पनि देशको समस्या समाधान होस भन्ने हेतुले आफुले प्रयोग गर्दै आएको विलासी विमान बेच्ने घोषणा गरेका हुन् । वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपति ओब्राडेरले विमान बेचेर आएको रकमबाट गैरकानुनी आप्रवासन नियन्त्रण गर्न खर्च गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले चढ्ने बोइङ ड्रिमलाइनर ७८७… पुरा पढौ
तेल बोकेका दुई वटा ट्यांकरमा आक्रमण,घटनापछि तेलको मूल्य बढ्यो
ओमानको खाडीमा तेल बोकेका दुई वटा ट्यांकरमा आक्रमण भएको छ । बिहीबार गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको अवस्थाममा दुई ट्यांकरमा विस्फोटक हमला भएको हो । आक्रमणको विषयलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत सुरु भएको छ । अमेरिकाले आक्रमणमा इरान जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । इरानले भने उक्त आरोप निराधार रहेको दावी गर्दै आएको छ । जापानको स्वामित्वको रहेको कोकुका करेजिएस र नर्वेजिन कम्पनीको फ्रन्ट अल्टाएयरमा बिस्फोट भएको हो । घटना… पुरा पढौ
आमाको विवाहमा छोराको भावुक शुभकामना,जसले थामिएन कसैको मन
भारतको केरलका एक युवकले आफ्नी आमाको विवाहमा दिएको भावुक सन्देश निकै भाइरल भएको छ । गोकुल श्रीधर नाम गरेका ती युवकले आफ्नी आमाको दोस्रो विवाहका अवसरमा शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोस्ट गरेका हुन् । मंगलबार उनले पोस्ट गरेको सन्देशमा तीन हजार तीन सयभन्दा बढीले प्रतिक्रिया जनाएका छन् भने उक्त पोस्टलाई ४ हजार दुईसय भन्दा बढीले शेयर गरेका छन् । मलयालम भाषामा लेखिएको सन्देशमा गोकुलले आफ्नी आमालाई भनेका छन्, ‘एक महिला, जसले… पुरा पढौ